Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Camey: Diyaarad aan fasax haysan ma tegi karto Buuhoodle | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Camey: Diyaarad aan fasax haysan ma tegi karto Buuhoodle
Cabdixakiin Cabdullaahi Camey
GAROOWE – Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar(Camey) ayaa sheegay in diyaarad aan fasax ka haysan Puntland aysan ka degi karin magaalada Buuhoodle.
Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar(Camey) ayaa sheegay iney joojiyeen diyaarad doonaysay in ay ka degto magaalada Buuhoodle taasoo aan fasax ka haysan Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland.
Wuxuu sheegay in diyaaradda ay la socdeen samafalayaal ajnabi ah balse aysan dowladu war u hayn markii hore ujeedka ay diyaaradu ugu socotay magaalada Buuhoodle.
Sababta diyaaradda loo joojiyay waxay ahayd inaysan dowladda ogeyn ujeedada ay ugu socoto Buuhoodle,waan la hadalnay waxayna noo sheegen in si qaldan wax loogu sheegay ujeedkuna uu yahay inay caawiyaan dadka abaartu saameysay.” ayuu yiri Eng Camey
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa sheegay in diyaaradda doonaya iney tagaan magaalada Buuhoodle marka hore ay lasoo xiriiraan Wasaaradda Duulista hawada iyo garoomada Puntland si loo hubby,taasina ay tahay xaqiijinta nabadgalyada.